Onye isi ala Nyusi: Mozambique na-emezigharị mpaghara ndị njem maka iji dọta ndị na-etinye ego na ha
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Mozambique » Onye isi ala Nyusi: Mozambique na-emezigharị mpaghara ndị njem maka iji dọta ndị na-etinye ego na ha
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • investments • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • Akụkọ kacha ọhụrụ na Mozambique • News • ndị mmadụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem
Onye isi ala Mozambique Filipe Nyusi kwuru na Tọzdee, n'okwu ya n'okwu mmeghe na International Conference on Nature-based Tourism, na gọọmentị ya na-emezigharị mmezigharị iji gbanwee mpaghara njem ndị njem na ịbawanye arịrịọ ndị na-etinye ego na ya.
Nzukọ ụbọchị atọ nke International Conference on Nature-based Tourism nke emere na Maputo na nke mbụ ya, kpọkọtara ndị isi na ndị otu nọ na mpaghara ụwa niile.
Nyusi kwuru na gọọmentị nke Mozambique emeela ihe iji meziwanye azụmahịa na ịkwalite uru nke njem, gụnyere inweta mfe maka visa, ndozi nke mba na ọrụ ndị njem ka mma.
“Gọọmentị na-ekpochapụ omume rụrụ arụ na nke ọchịchị na-egbochi itinye ego n'ọrụ. Anyị ahapụla ohere ikuku mba maka ụgbọ elu mba ofesi, nke na-enye ha ohere isi na mba ha kwaga Mozambique ozugbo, ”ka onye isi ala ahụ kwukwara.
Dabere na onye isi ala, mpaghara ndị njem na-eto ma na-ewe ndị ọrụ 60,000 ọrụ ugbu a, yana onyinye dị ukwuu na GDP nke mba ahụ.
Site na mpaghara 25 nke mpaghara ya nke mpaghara nchekwa, Mozambique lere njem nleta anya dị ka otu n'ime usoro ụzọ anọ ya. Atọ ndị ọzọ bụ ọrụ ugbo, ume na akụrụngwa.
Mozambique bụ mba ndịda ọdịda anyanwụ Africa nke ogologo ụsọ oké osimiri Indian nwere oke osimiri ndị a ma ama dịka Tofo, yana ogige ntụrụndụ osimiri. Na Quirimbas Archipelago, nke dị kilomita 250 nke agwaetiti coral, agwaetiti Ibo jupụtara na mangrove nwere oge mkpọmkpọ ebe nke dị ndụ site n'oge ọchịchị Portuguese. Bazaruto Archipelago nke dị n’ebe ndịda nwere akuku mmiri nke na-echebe ndụ mmiri dị obere gụnyere dugongs.
Naanị asụsụ gọọmentị nke Mozambique bụ Portuguese, nke a na-asụkarị dịka asụsụ nke abụọ site n'ihe dị ka ọkara ndị bi na ya. Asụsụ ndị obodo na-asụkarị gụnyere Makhuwa, Sena, na Swahili. Ọnụ ọgụgụ obodo nke ihe dị ka nde 29 bụ ndị Bantu karịrị. Okpukpe kachasị na Mozambique bụ Iso Christianityzọ Kraịst, nke nwere ọnụ ọgụgụ dị nta na-eso Alakụba na okpukpe ọdịnala Africa. Mozambique bụ onye otu United Nations, African Union, Commonwealth of Nations, Organisation of Islamic Cooperation, Community of Portuguese Language Countries, Non-Aligned Movement na Southern African Development Community, ma bụrụkwa onye na-ekiri ihe na La Francophonie.